Ahoana ny fihainoana mozika nefa tsy mandany angona amin'ny Apple Music | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fihainoana ny mozikanao nefa tsy mandany angona amin'ny Apple Music
Jesus Arjona Montalvo | | Apple Music, iPad, iPhone, Mac OS X
Apple Music natao ho an'ny mozika mivantana, natao hahafahanao mihaino ny famakiam-boky amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fiheverana fa manana izany ianao fifandraisana data. Androany, na izany aza, ny drafitra angon-drakitra tsy voafetra dia maningana fa tsy ny lalàna, ka mety te-ho kely fandaniam-poana ianao amin'ny Apple Music.
Apple Music mamela anao Tehirizo ao amin'ny iPhone, iPad, iPodTouch na Mac anao ny hiranao, rakipeo ary ny lisitry ny lisitry ny lisitra hahafahanao mihaino azy any aoriana, izay mety hanampy be raha tsy manana drafitra angona tsy voafetra ianao. Azontsika atao amin'ny alàlan'ny iTunes Match ny fananana ny mozika rehetra amin'ny iCloud sy amin'ny fitaovanao rehetra indray mandeha, fa misoratra anarana iTunes Match herintaona no vidiny 24,99 €, noho izany dia hasehoko anao ny fomba fitehirizana ny mozika tsirairay amin'ny Mac / PC, iPhone na iPad anao.
Miaraka amin'ireto pikantsary manaraka ireto dia heveriko fa izany no fomba mora indrindra hahafantarana ny fomba fitehirizana ny mozika amin'ny MAC na PC, ary holazainay aminao ny fomba hidirana amin'ny manaraka. Andao handeha ho any amin'ny hira na ny playlist misy ellipsis miseho eo akaikiny ny lohateny dia omenay «Manampia mozika», omenay azy araka izay hita eo amin'ny sary faharoa etsy ambany, ho to download.
Ao amin'ny PC na Mac noho ny iTunes ny mozika dia azo idirana amin'ny takelaka "Ny mozikako”Ary ny playlists dia miseho eo ambanin'ny safidin'ny Apple Music Playlists ao amin'ny sidebar. Mila mankany fotsiny ianao menio iTunes ary tsindrio "Hijery> mozika tsy misy an-tserasera fotsiny". Ao amin'ny Windows, sokafy ny iTunes dia tsindrio "Ctrl + B" hikaroka avy hatrany ny safidy mitovy amin'izany: "Ny mozika tsy misy an-tserasera fotsiny"
Ny fampiharana mozika amin'ny iPhone na iPad anao dia hanamora ny raharaha. Raha vantany vao nandefa ilay fampiharana amin'ny iPhone, iPad na iPodTouch ianao, tsotra mankanesa any amin'ny hira, rakikira na playlist te hisintona amin'ny fitaovanao ianao, ary tsindrio ny ellipsis eo ankavanan'ny lohateny "Safidy misimisy kokoa (…)". Hahazo menio mihetsiketsika ianao ary azonao kitihina ny “Azo alaina an-tserasera”. Afaka mahita ireo hira sy rakikira voatahiry ao amin'ny "My Music> Playlists”. Plus safidy maro hafa.
Ny fampidinana araka ny hitantsika dia atao amin'ny fitaovana manokana, izay midika fa raha te hanana hira na playlist amin'ny Mac sy amin'ny iPhone ianao dia tsy maintsy manao ny Dingana roa.
Raha manana fanontaniana momba ny dingana rehetra hitehirizana ny mozika ianao, ataovy hevitra izahay amin'ny fanontanianao. mahafaly
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » Ahoana ny fihainoana ny mozikanao nefa tsy mandany angona amin'ny Apple Music
Fanontaniana iray ary aza raisina ho adala aho, eny eny kely hahahaha, raha misintona ny mozika aho mba hihainoana azy amin'ny Internet ary voatahiry ao amin'ny mac (hard drive) ara-batana aho, raha tsy miala amin'ny serivisy appel aho, aorian'izay. ampandoavinao vola aho noho ireo fisintomana rehetra ireo? Misaotra betsaka fa ahiahy tsy mamela ahy hatory hahahahaha
Fanontaniana tsara re izany Tomás, ary tsy afaka mamaly anao marina aho, navelanao ho ahy ihany koa io fisalasalana io, na dia tsy hitako aza izany. Ny eritreritro dia ny azonao atao dia atsaharo ny fanarahana ny famandrihana, ary noho izany dia tsy hanana olana ianao, zavatra iray hafa dia ny fampiasanao azy avy eo.
Ny mozika sintominao avy amin'ny Apple Music dia tsy misy DRM, fa ny lalao iTunes kosa tsy misy DRM. Ny zavatra mety lojika dia rehefa mifarana ny famandrihana anao, hofafana ireo mozika alaina avy amin'ny Apple Music
Toy ny spotify, ny mozika dia voatahiry ao anaty rindrambaiko, ankolaka amin'ny kapila. Raha tsy mpamandrika ianao dia tsy afaka mampiasa ilay rindranasa amin'ny fomba premium, noho izany tsy afaka mihaino ny mozika ianao raha tsy misy fifandraisana.
Tombontsoa iray, tsy afaka mihaino ny Apple Music amin'ny iPhone amin'ny drafi-data aho. Rehefa manana wifi ihany aho. Efa nanara-maso ny mpandraharaha findaiko aho ary manizingizina izy ireo fa izany ilay fampiharana. Azonao atao ve ny manampy ahy hahafantatra ny antony tsy mety amiko?
Mandehana any amin'ny Settings-Mobile Data i Dario, midina ianao ary tadiavo ny mozika izay Apple Music, ampandino izany. Miarahaba.
Ka raha misintona mozika paoma aho dia afaka mihaino ny mozika tadiaviko nefa tsy mandany data (aorian'ny fisintomako azy amin'ny wifi) dia mieritreritra ny hisoratra anarana aho ary te hanana ny hevitro mazava haha
Manana fanontaniana izay mety tsy misy ifandraisany amin'ny fihainoana mozika ivelan'ny Internet aho, fa izao no hany fomba ahafahana mamonjy mozika amin'ny iPhone dia amin'ny iCloud? Satria tsy avelan'ny iTunes hamindra mozika amin'ny iPhone toa ny taloha aho, raiso ilay hira alaina avy amin'ny ares na youtube ary sintomy mankany amin'ny iPhone-ko izany. Manantena aho fa efa nahazo ny olako ary manantena aho fa misy manampy ahy !!
Francisco Lupianez Garcia dia hoy izy:
Salama, salama maraina, tsy haiko raha misy manana an'io olana io amin'ny mozika alaina avy amin'ny Apple Music hampiasa azy io amin'ny iPhone any aoriana. Ny olako dia izao manaraka izao, misintona ny mozika manaraka ireo dingana voalaza aho ary manamarina fa alaina ny mozika, hatreto dia marina daholo. Indraindray rehefa mandeha any amin'ny playlist izay efa nakariko taloha aho dia manamarina fa tsy misy ny hira rehetra na tsy misy misy, ny tena izy dia somary mamoy fo satria raha tsy hoe manana drafitra angon-drakitra tsy voafetra tsy misy tsy fahombiazana isika ity Option ity dia tena decaf ny serivisy. Andao hojerentsika raha manana vahaolana amin'ity olana ity ianao. fiarahabana
Valiny tamin'i Francisco Lupiañez Garcia
Salama manana fanontaniana aho, nanampy mozika sy playlists sasany ho an'ny mozika paoma avy amin'ny telefaona aho fa rehefa niditra ny moziko avy any iTunes dia tsy nisy zavatra nampiana.
Edward Corridor dia hoy izy:
Azonao atao ny mihaino azy raha mbola tsy manakatona ilay rindranasa ianao ary raha tsy manana drafitra angon-drakitra ary tsy manana Wi-Fi ianao
Valiny tamin'i Edward Corredor
Tonga any amin'ny Apple Pay i Banco Santander fa any Angletera
Mahjong Artifact: Toko 2, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra Mac App Store